Uzokwethula i-SOPA uNdunankulu kuleli sonto – Sivubela intuthuko Newspaper
Kulindeleke ukuthi uNdunankulu wesifundazwe sa Kwa Zulu-Natali uMnuz Sihle Zikalala ethule inkulumo yakhe yokuqala ngqa azobe eyibhekise esifundazweni saKwa Zulu-Natali ngolwesihlanu lomhlaka 28 kwephezulu.
Kwinkulumo yakhe, uZikalala kulindeleke ukuthi abeke eqhulwini izinyathelo ezizothathwa uHulumeni wesifundazwe ezizothuthukisa isimo salesi sifundazwe. Inkulumo kaNdunankulu kulindeleke ukuthi igxile kakhulu ohlwini lwezinto eziyisikhombisa uHulumeni wesifundazwe ozibophezele ukuzifeza. Lolu hlu luthinta, ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi, ukuthuthukiswa kokukulethwa kwezidingo kubantu, ukukhulisa umnotho wesifundazwe, impilo engcono kwizakhamuzi zesifundazwe kanye nezindawo zokuhlala zabantu ezisezingeni elifanele.
Ekhuluma ngamalungiselelo enkulumo yakhe, uZikalala uthe konke kumi ngomumo.
“Amalungiselelo enkulumo yami engizoyibhekisa esifundazweni asezingeni elincomekayo. Senze konke obekumele sikwenze ukwenza lo mcimbi ube yimpumelelo, sibambe ama Lekgotla nazo zonke izinhlaka ezithintekayo. Sidlulisa ukubonga kuzo zonke izakhamuzi zaKwaZulu-Natali ezisebenze ngokuzikhandla ukwenza lo mcimbi ube yimpumelelo,” kusho uZikalala.
Inkulumo ka Ndunankulu izokwandulelwa ukwethulwa ngokusemthethweni kwesi Shayamthetho saKwa Zulu-Natali esizobe siholwa ibutho leNkosi yakwa Zulu u King Goodwill kaBhekuzulu ngoLwesine.
Uzobamba isithangami nabezindaba ungqongqoshe